कामकाजी आमाका लागि सन्तान बोझ कि गौरव ? |
प्रकाशित मिति :2020-05-23 16:41:52
केही दिन अगाडि सामान खरिदका लागि एउटा सुपर मार्केट चहार्दै थिएँ । एउटा ल्यापटप ब्याग मन प¥यो । ब्याग हेर्दै थिएँ, माथिल्लो तल्लामा रहेको सो स्टोरको पछिल्लो भागमा सेक्योरिटी र एड्मिनको अफिस रहेछ । अचानक एडमिन (लेखा) शाखाभित्र एक महिला हतार हतार छिरिन् । हेर्दै सम्भ्रान्त र व्यवसायीक देखिने ती महिला अफिस छिर्नेबित्तिकै केही भनाभन् भएको र नानीहरू रोएको आवाज आयो । बाहिरबाट के कुरा हुँदै थियो स्पष्ट नसुने पनि बाझाबाझ गरेको र एकले अर्कोलाई औंला उठाएको म देखिरहेकी थिएँ । मेरो ध्यान ल्यापटप ब्याग भन्दा सो कोठामा भईरहेको गतिविधिमा केन्द्रित रह्यो, निकै बेर । धेरै बेरसम्म भित्र खोई के कुरामा वादविवाद भईरह्यो । अति भएपछि संगै रहेका सेल्स गर्लसंग के भएको भनेर सोधें । उनले अप्ठेरो मान्दै सानी केटीहरूले चोरी गरेका र उनका अभिभावक र एड्मिन बीच कुरा भई रहेको बताइन् । मन मानेन र सो कोठातिर लागेँ । ढोकामा अडेस लगाई रहेकी एक महिलाले मलाई बाटो छोडिदिइन् । म भित्र आउन सक्छु कि ? अनुमति माग्दै म भित्र छिरें । भित्र दुई सुरक्षा गार्ड, चार महिला र भर्खर ११ र १२ वर्षका बालिकाहरू थिए । स्कुलकै पहिरनमा निकै डराएका नानीहरू मलाई देखेपछि झन् कालो निलो देखिए । के भयो ? मेरो प्रश्नको उत्तरमा लेखा शाखाकी महिलाले बेलिविस्तार लाईन् ।
काठमाडौका नाम चलेका अत्यन्त महंगा स्कुलमा गनिएका स्कुलमा कक्षा सातमा पढिरहेका ती नानीहरू स्कुल पश्चात रहरैले सुपर मार्केट घुम्न आएका रहेछन् । उनीहरूको घरमा खानका लागि त्यहाँ पाईने कुनै पनि खानेकुराको कमी थिएन । न त स्याम्पु, कोल्ड क्रिम लगायतका सामग्रीको । अभाव थियो त मात्र पैसाको । अभिभावकबाट पैसा दिने नगरेको नानीहरूले बताए । ‘के चोर्नकै लागि आएको हो त ?’ मैले सोधें । नानीहरूले जवाफ दिन नपाउँदै लेखा शाखाकी कर्मचारी जंगिइन् ‘इन्टेन्सनली चोर्नकै लागि हो, यी हेर्नुस् त घरको झोलासमेत बोकेको छ, सामान पनि त्यसैमा राखेको छ….।’ उनको कुरा बीचमा काट्दै मैले भने, ‘नानीहरूका कुरा सुन्न दिनोस् न पहिला ।’ अविवाहित जस्ता देखिने ती कर्मचारी महिलाले मेरो कुरा सुनेपछि बोलीमा लगाम लाइन् ।
बिस्तारै ती नानीको टाउको मुसार्दै सोधें, ‘नडराई भन त नानु, तिम्रो साथीको बर्थ डे थियो हो ? घरबाट पैसा नदिएर गिफ्ट दिन चोरेको हो ?’ मैले फकाउँदै सोधें । मेरो सोध्ने शैलीले होला अलि सहज भयो उनलाई । र भक्कानिदै जवाफ दिईन्, ‘इन्टेन्सनली चोर्न आको होइन । घरमा कोइ थिएनन्, बोर लागेर हामी घुम्न आको । अरु बेला पनि हामी आएथ्यौं तर यस्तो कहिले गरेका छैनौं । आज त्यो चकलेट (आफूले लिएको सामानबाट देखाउँदै) देखेर लोभ लाग्यो । अनि त्यो टिप्यौंं । खोइ के भो के भो त्यसपछि अरु सामान पनि लिन मन लाग्यो । हामी पक्रियौं’ यति भनेर उनीहरू निक्कैसंग रोए । साथमा तिनीहरूका आमाहरू पनि । वातावरण निकै रुग्ण बन्यो । अघिसम्म रिसाइरहेकी लेखा शाखाकी कर्मचारी महिलाका पनि आँखा रसाए ।
मीरा राभण्डारी अमात्य
गल्ती सबैबाट हुन्छ । नानीहरूको उमेर, घरको परिस्थिति स्कुलले नानीहरूमाथि गर्ने व्यवहार । शायद केही त्यस्ता व्यवहार र नैराश्यताका कारण नानीहरूबाट गल्ती भएको हुन सक्छ । आफ्नो क्यारियरमा मात्र होइन, आफ्ना नानीहरूलाई पनि समय दिनुहोस् भन्दै निकै बेर ती निरीह आमाहरू र लेखा शाखाका कर्मचारीलाई भनियो । बल्ल ती नानीहरूलाई आइन्दा फेरि गल्ती नगर्ने सर्तमा लेखा शाखा छोड्यो । यस बारेमा घरमा कसैलाई नभन्न र नानीहरूलाई घरमा पिट्न वा गाली नगर्न अनुरोध गर्दै म आफ्नो सामान लिएर लेखा शाखा बाहिरको भिडलाई चिर्दै निक्ले ।
कयौं दिनसम्म ती नानीहरू र रोइरहेका तिनीहरूका आमाहरूको सम्झना आइरह्यो । धन्यबादसहित आआफ्नो फोन नम्बर दिएका थिए ती नानीका आमाहरूले । तर फोन गरेर उनीहरूलाई हिनताबोध गराउन चाहिन मैले । म आफै पनि एक आमा हुनुको कारण सहजै बुझ्न सक्थें ती आमाहरूका पीडा । अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूमा हाइ प्रोफाइलमा रहेकी ती आमाहरूले तिनै नानीहरूका लागि रात दिन मेहनत गरिरहेका छन् । तर कार्यालय र संगठनमा समय दिनु पर्ने बाध्यताका कारण आफ्ना नानीहरूलाई आवश्यक समय दिन सकेनन् र ती नानीहरूबाट सो अपराध भएको मेरो आफ्नो व्यक्तिगत बुझाई छ ।
समयको माग र समाजको चरित्र परिवर्तनसंगै हाम्रो विगतको फराकिलो समाज अहिले क्रमस एक्लिदै छ । त्यससंगै मानिसको माग, चाहना र सोचाइमासमेत क्रमस बदलावले निरन्तरता लिँदै छ । हिजोका दिनमा महिलाहरू घर र नानी स्याहार्दै श्रीमान्ले कमाएर ल्याएको आर्थिक आयमा संतोष गर्दै व्यवस्थापन र गुजारा गर्थे । कमाई खासै नभए पनि घरमै स्वेटर बुन्ने, बत्ति कात्ने, धुप बाट्ने, टोपी सिउने, चर्खामा धागो कात्ने र लुगा सिउने जस्ता कामबाट थोरै भए पनि कमाउथे, रमाउँथे र व्यस्त रहन्थे । सासूससुरा नन्द आमाजुको बुर्हातन खप्दै, महिलाहरू घर सम्हाल्थे । महिलाहरूका आफ्ना मुल्य मान्यता, पहिचान र आत्म सम्मानमा खासै बहस पनि हुन्थेन । बिहेपछि परिवार र समाजकै काममा सिमित रहन्थे। नानीहरू हजुरबा हजुरआमासंग हुर्कन्थे । ठूलो परिवार र समाजमा हुर्कने हुँदा नानीहरूका हरेका क्रियाकलापमा नजर हुन्थ्यो अभिभावकको । अनुशासन, अदब र संस्कार उनीहरू आफूभन्दा ठूलासंग सिक्थे ।
महिलाका जिम्मेवारी र काम सिमित थिए । अहिले समाज परिवर्तन भएको छ । महिलाहरू लेखपढ गर्न थालेका छन् । पढेलेखेपछि स्वाभाविक रुपमा जागिर गर्न थालेका छन् र आफ्नो पहिचान र अस्तित्वलाई प्राथमिकतामा राख्ने संस्कार बढ्दो छ । समग्रमा खान लगाउन र दुई पैंसा आफै खर्च गर्न महिलाहरू सक्षम छन् अचेल । महिलाहरूले राजनीतिदेखि हरेक क्षेत्रमा आफ्नै पहिचान बनाएका छन् । तसर्थ अहिलेको समाजमा हिजोका दिनहरूमा जस्तो श्रीमान् र परिवारका अन्य सदस्यहरूबाट हेपिएर, दबिएर बस्नुलाई बर्बरता र दासत्व सम्झिइन्छ । त्यसैले हिजो समाजले खासै पचाउन नसकेको सम्बन्ध विच्छेदका घटना अहिले नेपाली समाजको लागि सामान्य हुँदै गएको छ । तर त्यसको प्रत्यक्ष मारमा भने निर्दोष नानीहरू पर्दै गएका छन् । आमाबाबा दुवैको माया पाउनु पर्ने उमेरमा उनीहरू डिप्रेशनका शिकार भएका छन् । त्यसको प्रभावले लागु पदार्थ दुव्र्यसनमा फसेर सामाजिक अपराधसमेत उनीहरूबाट हुने गरेको छ । जसका कारण उनीहरूको भविष्यसमेत धरापमा पर्दै गएको वास्तविकता अभिभावकले मनन् गर्न सकेको छैनन् ।
मनोविद् गंगा पाठकको क्लीनीक अहिले डिप्रेशनमा परेका नानीहरू बोकेर रुँदै आउने अभिभावकहरूले भरिने गरेको छ । आमा र बुबाको आपसी मन मुटाव, दिनहुँको कलह र सम्बन्ध विच्छेदका कारण नानीहरू डिप्रेशनमा पर्ने गरेको बताउनु हुन्छ, मनोविद् पाठक । त्यस्ता नानीहरूलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन कठिन हुने गर्छ । कति अभिभावकलाई नानीहरूका लागि मिलेर बस्न सुझाव दिँदा परिवार मिलेर फेरि खुशी साथ जोडिएको उदाहरण पनि प्रशस्तै छ उहाँसंग । तर शिक्षाको कमी, समाजको डर, आफन्तको हेपाइ पाईने त्रास र अनावश्यक इगो कै कारण धेरै महिला पुरुष मनोपरार्मबाट बञ्चित रहने गरेका छन् । त्यसै कारण आजकल अनेक सामाजिक समस्या बढ्दै गएको निश्कर्ष छ, पाठकको । घरायसी बोझ, कार्यालयमा हुने खिचातानी, प्रतिस्पर्धा र संगठनका व्यावसायीक समस्या सम्हाल्नु पर्ने कारण पनि महिलाहरू संधै तनावमा रहने गर्छन् । जसका कारण सामाजिक र पारिवारिक समस्याबाट सकेसम्म टाढिन खोज्ने, झिँजो मान्ने र कम प्राथमिकतामा राख्ने गरेकै कारण अहिले महिलाहरू आफ्ना नानीहरूबाट समेत टाढिँदै गएका छन् । बुझ्नै पर्ने बास्तविकता त के हो भने प्राकृतिक रुपले नै नानीहरू आमासंग बढी समय बिताउन चाहन्छन् । एक हिसाबले आमाको साथ नानीहरूका लागि सहज पनि हुने गर्छ । चाहे त्यो बुबासंग केही माग राख्न होस् वा बदमासी गर्दा कुटाईबाट बच्न होस् ।
समाजले झट्ट नदेख्ने तथ्य के हो भने महिलाहरू समाज निमार्णका अगुवा हुन् । यो समाजले सहजै स्विकार्न नसक्ने वास्तविकतालाई महिलाहरूले गौरवका रुपमा लिन आवश्यक छ । सन्तान र परिवारप्रतिको दायित्व भार होइन, गौरवको विषय हो । देश र समाजका लागि योग्य नागरिक दिएर आमाहरूले ठूलो गुण लगाएका छन् ।
विवाह सामाजिक संस्था हो । सो संस्थालाई हराभरा बनाउन सन्तानको आवश्यकता पर्छ । विवाह पश्चात सन्तान नहुँदा वा ढिलो हुँदा हुने ग्लानी, त्रास लगायत समाजबाट व्यहोनु पर्ने थप मानसिक तनाव समेतको भागी हुन्छन्, महिला–पुरुष । अझ थप महिलाहरूलाई यस मामिलामा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार देखाईन्छ । बाँझी भन्ने लाञ्छना लगाइन्छ । तर सन्तान भएकाहरूलाई नानीहरूको चकचक र थोरै बहुत जिद्दिपनले चिडचिडा किन हुने गर्छ ? यसको कारण केलाउन लाग्दा कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ । यदि यी यस्ता साना मसिना तर गम्भीर विषयमा ध्यान दिने हो भने समाज र राष्ट्रका लागि योग्य नागरिक दिन हरेक आमाहरू सक्षम हुने छन् । यो बलियो विश्वास हरेक महिलामा हुन आवश्यक छ ।
मनोविज्ञ पाठकको अनुभवमा जब नानीहरू डिप्रेशनमा पुग्छन् वा उनीहरूको मनोविज्ञान बिग्रने गर्छ, तब मेरो नानीलाई मनोपरामर्स दिन र उपचार गर्नु प¥यो भन्दै रुँदै धाउने पंक्तिमा बुबा भन्दा आमाकै संख्या बढी हुने गरेको छ । भन्नलाई त तेरो नि सन्तान हो नि, जिम्मेवारी तेरो पनि हो भन्दै बाबुलाई सन्तानप्रतिको दायित्व दिन खोजे पनि भावनात्मक रुपले आमाहरू सजिलै पन्छिन सक्दैनन् । समाजले झट्ट नदेख्ने तथ्य के हो भने महिलाहरू समाज निमार्णका अगुवा हुन् । यो समाजले सहजै स्विकार्न नसक्ने वास्तविकतालाई महिलाहरूले गौरवका रुपमा लिन आवश्यक छ । सन्तान र परिवारप्रतिको दायित्व भार होइन, गौरवको विषय हो । देश र समाजका लागि योग्य नागरिक दिएर आमाहरूले ठूलो गुण लगाएका छन् ।
अहिलेको बदलिँदो परिवेशमा आर्थिक उत्पादन र महिलाहरूका आत्म सम्मान र शिक्षामा गरेको लगानीलाई सदुपयोग गर्नकै लागि पनि घरको दहलिज पार गर्नु पर्ने आवश्यकता र बाध्यता अहिलेका महिलालाई छ । तर आफू अनुपस्थित रहँदा सासूससुरा, आमाबुबा वा अन्य बुजुर्गहरू संगै साथमा रहने र भविष्यमा आफ्ना सन्तानलाई उचित संस्कार दिने वातावरणका लागि सानातिना मन मुटावलाई नजर अन्दाज गरि परिवारमा मेल मिलापसंग रहने गरेमा भविष्यमा आउन सकने थुप्रै समस्याबाट धेरै हदसम्म जोगिन सकिन्छ ।
नानीहरूको आवश्यकता र मनोविज्ञानलाई समेत बुझ्नु अभिभावकहरूको कर्तव्य हुन्छ । किशोरावस्थाका नानीहरू स्वभावैले चञ्चल, उद्दण्ड र परिवर्तनमुखि हुन्छन् । छिटोछिटो हर्मोनमा भई रहने परिवर्तनका कारण उनीहरूमा के गर्दा ठीक वा बेठिक खुट्याउने क्षमता प्रायमा हुदैन पनि । स्कुल कलेजमा थरिथरिका पारिवारिक पृष्ठभूमि र आर्थिक हैसियतका साथीहरुसंग हुर्कन्छन् । उनीहरूको आवश्यकतालाई अभिाभावकले बुझिदिने र समय अनुसार धेरै थोरै पैसा खर्च गर्न दिनु उचित हुन्छ । बरु के कति खर्च कहाँ गरे भन्ने जानकारी समय समयमा लिने गर्नु, साथीसंगत के कस्ता छन्, ती कुरामा सँधै सजग रहनु पनि अभिभावकको प्रमुख जिम्मेवारी हुन्छ । जसले एउटा असल नागरिक हुर्कने र मौलाउने बलियो वातावरणको खाका कोर्ने गर्छ ।